काठमाडौँ । निकै आश्चर्य लाग्ने एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। भिडियोमा देख्न सकिन्छ एउटा पार्कमा आगलागी भइरहको र आगो चारैतिर दन्किरहेको छ। आगो फैलिदै गर्दा सबै भन्दा रोचक पक्ष छ...
बैशाख २६, २०७७, शुक्रबार
बेइजिंग । उत्तरी चीनमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई हत्या प्रयासको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। आफ्नी वृद्ध आमालाई एउटा खाल्डोमा पुरेर मार्ने प्रयासपछि ती पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चिनियाँ सञ्चार माध्यमका अनुसा...
नायमी। कोरोना महामारीले अहिले विश्वभर सङ्कट पैदा गरेको छ। कोरोनाको कहरका बीच अफ्रिकी देश नाइजरमा एउटा घटना यस्तो घटना भयो जसले मानिसहरूलाई निकै डरायो। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा हतारिँदै लेखे,'&...
मान्छेले आफ्नै शरीरको ताप दिएर चराचुरुंगीको अण्डा कोरलेको सुन्नुभएको छ? सायदै छैन होला तर यहाँ एउटा अनौठो र रमाइलो कुरा भएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एकजना महिलाले आफ्नो ब्राभित्र हाँसको अण्डा ...
बैशाख २१, २०७७, आइतबार
काठमाडाैं । अमेरिकाको मिचिगन राज्यले लकडाउनमा रहेका जोडीहरुलाई निःशुल्क कण्डमा वितरण गर्ने भएको छ । सरुवा रोगबाट बचाउन र सम्भावित जनसंख्या वृद्धि रोक्न प्रान्तीय सरकारले नै निःशुल्क रुपमा कण्डम उपलब्ध गराउन लाग...
विभिन्न धर्म संस्कार, देश, समुदाय र जाति अनुसार मृत्यु संस्कार तथा मृत शरीरको व्यवस्थापन गर्ने विधि फरक फरक रहेको पाइन्छ। तर यहाँ कतिपय मान्छेहरु जीवित छँदै आफ्नो अन्तिम संस्कार कसरी गर्ने पहिले नै भनिसकेका हुन्छ...
काठमाडौँ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा घटनाले निकै चर्चा पाएको छ। आफ्नो बिरामी बच्चालाई मुखमा च्यापेर बिरालो अस्पताल पुगेपछि चिकित्सक चकित भएका छन्। घटना टर्कीको इस्तानबुल शहरको हो। उक्त घटनाका केह...
एजेन्सी । कोरोना रोकमाथका लागि जारी लकडाउनले मानिसहरुलाई घरमै बस्न बाध्य बनाएको छ। सबैपरिवार एकै घरभित्र रहँदा यसले कलह समेत निम्त्याउँने गरेको छ। कलहका कारण पति-पत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेदका घटनाहरु वृ...
काठमाडौं। भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनादेखि ६० मिलोमिटरको दूरीमा रहेको दुल्हन बजार क्षेत्रमा निकै रोचक घटना भएको छ । लकडाउनको समयमा श्रीमती माइतीमै फसेको फाइदा उठाउँदै श्रीमानले प्रेमिकासँग बिहे गरेका...
काठमाडौं । आफूभन्दा ६ वर्ष कान्छो युवासँग आफैलाई जन्म दिने आमाको माया पिरती चलेपछि छोराको के हालत होला? फुटबलको क्षेत्रमा चर्चित हस्तीको रुपमा चिनिएका ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमारको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ। ...